Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » Abadli Bevumba Bakhumbula: Umhlaza Obangela Ungcoliseko
I-Odor-Eaters, ehanjiswa yi-Blistex Corp., ngokuzithandela ikhumbula izinto ezininzi zokutshiza ze-Odor-Eaters ezenziwe phakathi kwe-1 kaMatshi 2020 kunye no-Agasti 22, 2021, kwinqanaba labathengi. Uvavanyo lwangaphakathi luchonge amanqanaba asezantsi ongcoliseko lwe-benzene kwiindawo ezininzi zezi mveliso zeaerosol.
Amaqashiso amane e-Odor-Eaters® Spray Powder achatshazelwa koku kukhumbula ngokuzithandela, ngokukodwa:
UPC Ingcaciso yeMveliso uLote Umhla WOKUPHELELWA
041388004310 UMUPHO WOKUTSHIZA EZOKUNJA NGENKO (113 g) I-LOTD20C04 EXP 03/2022
041388004310 UMUPHO WOKUTSHIZA EZOKUNJA NGENKO (113 g) I-LOTD20K13 EXP 10/2022
041388004310 UMUPHO WOKUTSHIZA EZOKUNJA NGENKO (113 g) I-LOTD21H03 EXP 08/2023
I-Benzene ihlelwa njenge-carcinogen yomntu, into enokuthi ibangele umhlaza ngokuxhomekeke kwinqanaba kunye nobungakanani bokuvezwa. Abantu kwihlabathi liphela banokutyhileka rhoqo kwi-benzene kwimithombo emininzi, ngaphakathi nangaphandle. I-Benzene ifumaneka kuyo yonke indawo kokusingqongileyo. Ukuvezwa kwi-benzene kunokwenzeka ngokuphefumla, ngomlomo, nangolusu.
Iimveliso zokutshiza ze-Odor-Eaters ezikhunjulwa ngokuzithandela zipakishwe kwiitoti ze-aerosol. Iimveliso zasasazwa kuzwelonke eCanada ngokusebenzisa abathengisi abahlukeneyo. Abathengi kufuneka bayeke ukusebenzisa ezi mveliso zokutshiza ze-Odor-Eaters kwaye bazilahle ngokufanelekileyo. Nceda ujonge umfanekiso ongezantsi ukuze ufumane isikhokelo malunga nokuba ungazifumana phi iinkcukacha zekhowudi yeqashiso kwitoti.
Ukuqala ngoNovemba 18, 2021 ngo-8 am (EST), abathengi banokufikelela kwi-odoreatersrecall2021.com ukuze bacele ukubuyiselwa kwemveliso kunye nolwazi olongezelelweyo. Abathengi banokuqhagamshelana ne-1-855-544-4821 ngemibuzo ngoMvulo ukuya ngoLwesihlanu ukusuka kwi-8: 00am-5pm (EST). I-Odor-Eaters ikwazisa abathengisi bayo ngeleta kwaye ilungiselela ukubuyiswa kwazo zonke iimveliso ezikhunjulwe ngokuzithandela. Abathengi kufuneka baqhagamshelane nogqirha wabo okanye umboneleli wezempilo ukuba baye bafumana naziphi na iingxaki ezinokunxulumana nokusebenzisa ezi mveliso zokutshiza.
Iimpendulo ezingalunganga okanye iingxaki zomgangatho ofunyenweyo ngokusetyenziswa kwezi mveliso zininzi zinokuxelwa kwinkqubo yeNgxelo ye-Health Canada's MedEffect Adverse Reaction mhlawumbi kwi-intanethi, nge-imeyile rhoqo okanye ngefeksi.